Qabya-tirka Dastuurka Qaranka oo la dalbanayo inuusan dib uga dhicin sanadkan – Kalfadhi
Qabya-tirka Dastuurka Qaranka, oo qaadatay lix sano iyo bar (2012-2019), ayuu Golaha Aqalka Sare sheegay iney muhiim tahay in la soo gababeeyo sanadkan. Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa sheegay in waqtiga uu qaatay dhameystirka dastuurka dalka ay si xad dhaaf ah uga badan tahay waqtigii ay ahayd inuu qaato. “Dastuurka Soomaaliya waxa uu noqday mid ka mid ah dastuurada ugu waqtiga dheer dunida: diyaarintiisa iyo dhameystirkiisa, dhaqaale aad u badanna uu ku baxay, walina waa qabyo” ayuu yiri Guddoomiye Cabdi Xaashi.
Waxa uu sheegay in, marka la fiiriyo waqtiga u haray hadda qabyo-tirka dastuurka, ay aad u adag tahay in loo sii dul-qaato iney umuuruhu sidii hore iska sii ahaadaan, sida uu hadalka u dhigay.“Waxaa lagama maarmaan ah dhameystirka dastuurka” ayuu yiri Guddoomiye Cabdi Xaashi, isaga oo sheegay in ay qabashada hawshaas masuuliyad weyn ka saaran tahay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. “Waxaan soojeedinayaa in si buuxda loo garab istaago saddexda hay’adood ee (dastuurka) faraha ku haaya” ayuu yiri Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Haddii ay dhacdo in dhameystirka Dastuurka Ku-meel-gaarka ah lagu fashilmo waqtiga dowladda Farmaajo ayuu Sanatar Cabdiraxmaan Faroole sheegay in ay ceeb noqon doonto, sida uu hadalka u dhigay. “Haddii kale, waa la ceeboobayaa, oo dowladdu waxa uu waqtiga ka dhamaanaya, isaga oo uu dalku dastuurku u dhameen” ayuu yiri Sanatar Faroole. Intaas waxa uu Sanatarku raaciyey inuu ku taliyey in inta laga dhameynayo dastuurka ay Madaxda Dowladdu siduu yahay ugu sii dhaqmaan. “Madaxda hadda joogta waxaan u sheegayaa dastuurka sida uu u qoran yahay haloogu dhaqmo” ayuu yiro Faroole.
Sida uu sheegay Guddoomiyaha Aqalka Sare, Mudane Cabdi Xaashi, waxaa marka Dastuurka la qabyo-tiro hawl adag oo kale noqon doonta in dastuurada Dowlad Goboleedyada la waafajiyo Dastuurka Qaranka, taas oo uu sheegay inuu doorka ugu weyn ka saaran yahay Golaha Aqalka Sare, waxaana, sida uu Guddoomiyuhu sheegay, iyaga oo ay wada shaqeynayaan Dowlad Goboleedyada ay ka hawl-geli doonaan arrinkaas. “Golaha Aqalka Sare wuxuu diyaar u yahay inuu qaato kaalinta kaga aadan iswaafajinta dastuurada” ayuu yiri Cabdi Xaashi.
Isaga oo ka hadlaya sida ay qaranimada Soomaaliya urug ugu tahay Dastuurka Qabyada ah ayuu Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sheegay in dhibka ugu yar ee Soomaaliya haysta uu yahay Dastuurka Ku-meel-gaarka ah. “Waxa na gaaray waxa ugu sahlan waa inaan la dhameystirin dastuurkii” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Basle dastuurka, inta uu yahay sidaas uu soo ahaa ilaa Agoost, 2012, ayuu Sanatar Faroole qabaa in haddii lagu dhaqmo ay wax badan u hagaagi lahaayeen Soomaaliya. “Qabyo weeye waa run, oo waxbaa ka dhiman, waana wax sahlan oo laga saari karo, laakiin waxa ku qoran baaba cid ka badan haddii lagu dhaqmaayo, khilaafna ma keenayo” ayuu yiri Sanatar Faroole.
Shir dhawaan hay’adaha ka shaqeynaya qabya-tirka dastuurka (Guddiga Dib-u-eegista Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya, Guddiga Madaxa-banaan ee Dib-u-eegista Dastuurka iyo Wasaaradda Dastuurka) ugu soo dhamaaday Neyroobi, kaas oo socday hal todobaad, ayaa lagu sheegay in inta lagu guda jiro sanadkan la dhameystiri doono Dastuurka Ku-meel-gaarka ah.